हिम्मत छ दरबार हत्याकाण्डको रहस्य पत्ता लगाउने ?
काठमाडौं । आज जेठ १९ गते । १६ वर्षअघि आजैका दिन बार पनि त्यही शुक्रबार थियो । र, आज पनि वार ठ्याक्कै मिलेको छ । नेपाली राजनीतिमा शुक्रवारलाई त्यति राम्रो मानिँदैन । शुक्रबार आएपछि नेपाली जनताले त्रास बोक्ने गरेको छन् । नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको छ । तर, इतिहासको त्यो कालो दिन सम्भवतः कुनै पनि नेप...
कांग्रेसलाई एमालेको धक्का
जेष्ठ १९, 2074 काठमाडौं । भन्छि काँही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा । यस्तै भइरहेको छ संसद र भरतपुरमा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिन्छ, बानेश्वरमा संसद अवरुद्ध । यो क्रम बुधवारदेखि जारी छ । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतगणना र मतदान भन्ने विषयमा...
खोई कहाँ छ जेब्रा क्रसिङ ?
जेष्ठ १८, 2074 दृष्य नं. १ स्थान : गौशाला चोकसमय : विहान ९.२५ बजे गौशाला चोकमा उभिएकी एक म्यादी प्रहरीले ट्राफिकसँग भनिन्, ‘सर उसले त एक जना पनि पक्रिन भ्याइन’ उनी त्यसो भन्दा निकै मुस्कुराइन् । निक्कै भीडभाड थियो । यात्रुहरुको चाप त्य...
जेष्ठ १८, 2074 काठमाडौं । सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्न फेरि नागरिकको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । आगामी साउन महिनाभित्र घर घरमा पुगेर नागरिकहरुको विवरण संकलन गरिने भएको छ । परिचय पत्र वितरण गर्न...